Walking Frame က
ယန္တရားရှန်ဟိုင်းအထူးသတ္တု Co. , ခရီးသွားလာ, Ltd မှယန္တရား, jib lubbing ယန္တရား hoisting, ရိန်းခရီးသွားလာယန္တရားဖြန့်ဖြူး။ လယ်ပြင်၌ရှိသောကျနော်တို့ဂဟေဆော်, စက်နှင့်လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများကဲ့သို့ဝန်ဆောင်မှုများထောက်ပံ့နိုင်ဘူး။ ခရီးသွားလာယန္တရားကာဗွန်သံမဏိနှင့်အလွိုင်းသံမဏိကနေသစ်သားပုံစံနှင့်အစေး / ရေဖန်ခွက် / ဆိုဒီယမ် silicates သဲမှတဆင့်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သံမဏိ Cast ၏ဘုံအလေးချိန် 0.5 ကနေ 200tons မှဖြစ်ကြသည်။ နယ်လှည့်ယန္တရားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်နှင့် site ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်စုဝေး ...
ရှန်ဟိုင်းအထူးသတ္တု Co. , Ltd မှယန္တရား, jib lubbing ယန္တရား hoisting, ရိန်းခရီးသွားလာယန္တရားဖြန့်ဖြူး။ လယ်ပြင်၌ရှိသောကျနော်တို့ဂဟေဆော်, စက်နှင့်လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများကဲ့သို့ဝန်ဆောင်မှုများထောက်ပံ့နိုင်ဘူး။
ခရီးသွားလာယန္တရားကာဗွန်သံမဏိနှင့်အလွိုင်းသံမဏိကနေသစ်သားပုံစံနှင့်အစေး / ရေဖန်ခွက် / ဆိုဒီယမ် silicates သဲမှတဆင့်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သံမဏိ Cast ၏ဘုံအလေးချိန် 0.5 ကနေ 200tons မှဖြစ်ကြသည်။ စိတျအပိုငျးအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်နယျလှညျ့ယန္တရားနှင့် site ပေါ်တွင်စုဝေး
5. အပူကုသမှု - ကြိတ် (စစ်ဆေးရေး)
6. Rough စက် (စစ်ဆေးရေး) -finishing စက် (စစ်ဆေးရေး)
အဆိုပါစံစာရွက်စာတမ်းများတိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုခြေလှမ်းများ၏အပြည့်အဝ traceability သေချာ 2000: ထည်လမ်းကြောင်းအကောင်အထည်ဖော်အရည်အသွေးစနစ်က ISO 9001 ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များကအုပ်ချုပ်နေပါတယ်
•ထုတ်လုပ်သူစမ်းသပ်မှုလက်မှတ်များဓာတုဖွဲ့စည်းမှု, စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများနှင့် Non-အဖျက်စာမေးပွဲအပါအဝင် Din မာခ် 10,204 § 3.1 အရသိရသည်;
• Dimensional စစ်ဆေးမှုများတစ်ဦး "အဖြစ်-built" ပုံကြမ်းနှင့်အတူထောက်ခံ;
ယခင်: track ဖိနပ် drive ကိုဘီး drive ကို Sprockets
နောက်တစ်ခု: rotary လညျးမီးဖို, ဘောလုံးကိုကြိတ်နှင့်ပြွန်ကြိတ်များအတွက် girth ဂီယာ
track ဖိနပ် drive ကိုဘီး drive ကို Sprockets
ဘောလုံးကိုစက် Hollow Shaft
ဘောလုံးကိုစက်အဆုံးဖုံး, စာရေးကိရိယာများ Inl ...